Dagaalyahanada Al-shabaab oo si buuxo ula wareegay deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaalyahanada Al-shabaab oo si buuxo ula wareegay deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Goof-gaduud oo 30-km u jirta magaalada Baydhaba.
Dagaal oo saakay aroortii ay halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Al-shabaab ayaa ugu dambeyn keentay in dagaalyahanada Al-shabaab ay si buuxdo ula wareegaan deegaanka Goof-gaduud oo ku yaala duuleedka magaalada Baydhaba, waxaana halkaasi gebi ahaan isaga baxay ciidamadii hore ugu sugnaa ee ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa sheegtay in dagaalkii aroorii saakay ka dhacay deegaanka Goof-gaduud ay qasaare ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana ay kala wareegeen deegaankaas.
Dhinaca kale, warar madax banaan aynu heleyno in dagaalyahanada Al-shabaab ay haatan diyaar-garoow xoogan ugu jiraan sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen degmada Xudur gobolka Bakool.
Si kastaba oo ay ahaataba, dhawaan ayay markii dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool, kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada Itoobiya oo in muddo ah halkaas ku sugnaa.